Asomafo Nnwuma 5 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Asomafo Nnwuma 5:1-42
Anania ne Safira (1-11)
Asomafo no yɛɛ nsɛnkyerɛnne bebree (12-16)
Wɔde wɔn guu afiase, na wogyaa wɔn (17-21a)
Wɔsan de wɔn begyinaa Sanhedrin no anim (21b-32)
‘Onyankopɔn na ɛsɛ sɛ yetie no, na ɛnyɛ nnipa’ (29)
Gamaliel afotu (33-40)
Wɔkaa asɛm no wɔ afi afi (41, 42)
5 Ɔbarima bi a ne din de Anania, ne ne yere Safira nso tɔn agyapade bi. 2 Nanso oyii sika a wonyae no bi siei, na na ne yere nso nim ho bi. Na Anania de sika no fã bi pɛ brɛɛ asomafo no.+ 3 Ɛnna Petro bisaa no sɛ: “Anania, adɛn nti na woama Satan apiapia wo* sɛ bedi atoro+ kyerɛ honhom kronkron+ no, na fa asaase no ho sika no bi sie? 4 Bere a asaase no wɔ hɔ no, na ɛnyɛ wo dea anaa? Na bere a wotɔnee no nso, na sika no nyɛ wo ara wo dea? Adɛn nti na woadwen biribi a ɛte saa wɔ wo komam? Onyankopɔn na woadi atoro akyerɛ no, na ɛnyɛ nnipa.” 5 Bere a Anania tee asɛm yi no, otwa hwee, na owui. Na ehu kɛse kaa wɔn a wɔtee asɛm no nyinaa. 6 Ɛnna mmerante no sɔree, na wɔde ntama kyekyeree no, na wɔmaa no so kosiee no. 7 Bɛyɛ nnɔnhwerew abiɛsa akyi no, ne yere baa hɔ, na na onnim nea asi. 8 Ɛnna Petro bisaa ɔbea no sɛ: “Ka kyerɛ me, bere a motɔn asaase no, sɛɛ na mode gyei anaa?” Ɔkae sɛ: “Yiw, saa na yɛde gyei.” 9 Ɛnna Petro bisaa no sɛ: “Adɛn nti na mo baanu ayɛ adwene sɛ mobɛsɔ Yehowa* honhom ahwɛ? Hwɛ! Wɔn a wokosiee wo kunu no, wɔn na wote sɛ wɔreba a wɔadu ɔpon ano no.* Wo nso, wɔbɛsoa wo akɔ.” 10 Ɛhɔ ara na otwa hwee Petro nan ase wui. Bere a mmerante no beduu hɔ no, wohui sɛ wawu, na wɔmaa no so puei, na wokosiee no wɔ ne kunu nkyɛn. 11 Ɛno nti, ehu kɛse kaa asafo no nyinaa ne wɔn a wɔtee nsɛm yi nyinaa. 12 Bio nso, asomafo no kɔɔ so yɛɛ nsɛnkyerɛnne ne anwonwade bebree wɔ nkurɔfo no mu,+ na na wɔn nyinaa hyiam wɔ Solomon Abrannaa no so.+ 13 Ɛwom, nnipa a aka no mu biara annya akokoduru amfa ne ho ammɔ wɔn; nanso, nkurɔfo kaa wɔn ho asɛmpa. 14 Nea ɛsen saa no, wɔn a wɔagye Awurade adi no bebree bɛkaa wɔn ho, mmea ne mmarima pii.+ 15 Na wɔn a wɔyare mpo, wɔde wɔn baa abɔnten bɛtotoo mpa nketewa ne kɛtɛ so, sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ Petro retwam a, ne sunsuma betumi atɔ wɔn mu bi so.+ 16 Bio nso, nnipa pii fifi nkurow a atwa Yerusalem ho ahyia no mu bae. Wɔreba no, na wɔsoso ayarefo ne wɔn a ahonhom fĩ haw wɔn, na wɔn nyinaa nyaa ayaresa. 17 Na ɔsɔfo panyin no ne wɔn a wɔka ne ho a wofi Sadukifo kuw mu no nyinaa sɔree, na na ahoɔyaw ahyɛ wɔn ma. 18 Ɛno nti, wɔkyeree asomafo no de wɔn guu afiase.+ 19 Nanso anadwo no, Yehowa* bɔfo buebuee afiase apon+ no, na oyii wɔn puei. Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: 20 “Monkɔ, na munkogyina asɔrefi hɔ, na monkɔ so nka nkwa yi ho nsɛm nyinaa nkyerɛ nkurɔfo no.” 21 Bere a wɔtee saa no, wɔkɔɔ asɔrefi hɔ ahemanakye, na wofii ase kyerɛkyerɛe. Ɛnna ɔsɔfo panyin no ne wɔn a ɛka ne ho no bedui, na wɔfrɛɛ Sanhedrin no ne Israel mma mpanyimfo bagua no nyinaa hyiae, na wɔsoma kɔɔ afiase hɔ sɛ wɔnkɔfa asomafo no mmra wɔn anim. 22 Nanso bere a awɛmfo no koduu hɔ no, wɔanhu wɔn wɔ afiase hɔ. Enti wɔsan kɔbɔɔ amanneɛ. 23 Wɔkae sɛ: “Yehui sɛ wɔato afiase no mu denneennen, na na awɛmfo no gyinagyina apon no ano, nanso bere a yebuei no, yɛanhu obiara wom.” 24 Bere a asɔrefi hwɛfo no ne asɔfo mpanyin no tee asɛm no, wɔn adwene tu frae efisɛ na wonnim sɛnea asɛm no bɛkɔ akowie. 25 Ɛnna obi bae bɛbɔɔ wɔn amanneɛ sɛ: “Hwɛ! Mmarima a mode wɔn guu afiase no wɔ asɔrefi hɔ, na wogyina hɔ rekyerɛkyerɛ nkurɔfo no.” 26 Enti awɛmfo panyin no ne n’awɛmfo kɔfaa wɔn bae, nanso wɔanyɛ wɔn basabasa, efisɛ na wosuro sɛ nkurɔfo no besiw wɔn abo.+ 27 Enti wɔde wɔn begyinaa Sanhedrin no anim. Na ɔsɔfo panyin no bisabisaa wɔn nsɛm. 28 Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Yɛhyɛɛ mo denneennen sɛ monnkyerɛkyerɛ din yi mu+ bio. Nanso hwɛ! mode mo nkyerɛkyerɛ ahyɛ Yerusalem ma, na moasi mo bo sɛ mode onipa yi mogya bɛba yɛn so.”+ 29 Ɛnna Petro ne asomafo a aka no kae sɛ: “Onyankopɔn ne sodifo a ɛsɛ sɛ yetie no, na ɛnyɛ nnipa.+ 30 Yɛn agyanom Nyankopɔn nyan Yesu a mosɛn no dua so kum no no.+ 31 Onyankopɔn hyɛɛ Yesu yi anuonyam, na ɔyɛɛ no Ɔsafohene+ ne Agyenkwa,+ na ɔde no tenaa ne nsa nifa+ sɛ ɔmma Israel nnya adwensakra ne bɔnefakyɛ.+ 32 Yɛyɛ nsɛm yi ho adansefo,+ na honhom kronkron+ a Onyankopɔn de ama wɔn a wotie no* no nso di ho adanse.” 33 Bere a wɔtee eyi no, wɔn bo fuwii paa,* na na wɔpɛ sɛ wokum asomafo no. 34 Nanso Farisini bi a wɔfrɛ no Gamaliel+ sɔree wɔ Sanhedrin no mu. Ná ɔyɛ obi a ɔkyerɛ Mmara, na na nkurɔfo no nyinaa bu no. Ɔkae sɛ wɔmfa mmarima no mpue kakra. 35 Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Israel mmarima, nea mopɛ sɛ mode yɛ saa mmarima yi, munnwen ho yiye. 36 Hwɛ, bere bi a atwam no, Teuda sɔree, na ɔkae sɛ ɔyɛ onipa titiriw. Na mmarima a wɔn dodow bɛyɛ 400 kɔkaa ne kuw no ho. Nanso wokum no, na wɔn a wodi n’akyi nyinaa bɔ hwetee, na ansi wɔn yiye. 37 Ɔno akyi no, Galileani bi a ne din de Yuda nso sɔree wɔ nna a na wɔrekyerɛw din no mu, na ɔtwee nnipa dii n’akyi. Saa ɔbarima no nso wui, na wɔn a wodi n’akyi nyinaa bɔ hwetee. 38 Ɛno nti, nea ɛrekɔ so seesei yi, nea mɛka akyerɛ mo ne sɛ, monnhaw saa mmarima yi. Mmom, munnyaa wɔn. Efisɛ sɛ nkyerɛkyerɛ yi anaa adwuma yi fi nnipa a, ebegu. 39 Na sɛ efi Onyankopɔn a, ɛnde morentumi ngu+ no. Anyɛ saa a, ɛbɛyɛ sɛ nea mo ne Onyankopɔn ankasa na ɛreko.”+ 40 Bere a ɔkaa eyi no, wotiee n’afotu no, na wɔfrɛɛ asomafo no hwee wɔn.+ Na wɔka kyerɛɛ wɔn denneennen sɛ wonnyae Yesu din ho asɛm ka, na wogyaa wɔn. 41 Ɛnna wɔde anigye+ pue fii Sanhedrin no anim kɔe, efisɛ wobuu wɔn sɛ ne din nti, wɔfata sɛ wogu wɔn anim ase. 42 Na wɔkɔɔ so kyerɛkyerɛe, na wɔkaa Kristo Yesu ho asɛmpa no wɔ asɔrefi hɔ ne afi afi+ mu da biara, na wɔannyae.+
^ Anaa “apirim wo koma.”
^ Anaa “wɔn anammɔn na ɛwɔ ɔpon ano no.”
^ Anaa “wɔn a wotie no sɛ sodifo.”
^ Anaa “ɛwowɔɔ wɔn.”
Asomafo Nnwuma 5